Ingiriiska oo ka horyimid muddo kordhinta Hay’adaha Dowladda Federaalka | Dhacdo
Ingiriiska oo ka horyimid muddo kordhinta Hay’adaha Dowladda Federaalka
Dowladda Britain ayaa ka hortimid tallaabada muddada labada sano ahi loogu kordhiyay Madaxtooyada iyo Baarlamaanka Somaliya.
Bayaan ka soo baxay Xafiiska Arrimaha Dibadda, Barwaaqo Sooranka & Horumarinta Biritain ayaa lagu sheegay muddo kordhinta inay hoos u dhigeyso kalsoonida lagu qabi karo hoggaanka dalka.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Dowladda Britain ay dib u eegis ku samayn doonto xiriirka iyo taageeradeeda Somaliya, iyadoo markaasi la kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka.
Bayaanka ayaa u qornaa:–
Waxaan aad uga xunahay go’aanka Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Somaliya uu laba sano ugu kordhiyay Maxamed Farmaajo xilka Madaxweynaha iyo kan Baarlamaanka Somaliya. Tani xal uma ahan culeysyada jira ee ku aaddan hannaanka geedi-socodka doorashada, laakiin taa bedelkeeda waa tallaabo hoos u dhigeysa kalsoonida lagu qabo hoggaaminta Somaliya, isla-markaana khatar ku ah amniga iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed
Waxaan si isdaba joog ah uga soo horjeednay dadaal kasta oo horseed u noqda geed- socod is barbar socda, doorasho qayb ah ama kordhinta hawlaha horyaala. Waxaan ka codsaneynaa Madaxda Somaliya inay ka waan-toobaan ficil kasta oo dheeri oo keli ah oo kicin kara xiisadaha siyaasadeed ama rabshadaha. Waa muhiim in dhammaan dhinacyada ay isdejiyaan, oo ay ilaaliyaan xasilloonida iyo amniga Somaliya.
Wadahadalka wax ku oolka ah ee u dhexeeya Madaxda Soomaalida ayaa lafdhabar u ah xaqiijinta dhaqangelinta heshiiskii 17-kii Sebtember ee qaabka doorashada. Heshiiskaasi waa aasaaska keliya sharciyeysan ee doorashooyinka. Hadda waxaa la jooggaa xilligii Madaxda Somaliya ay eegi lahaayeen wixii ka baxsan danaha gaarka ah, oo ay dhowraan masuuliyadda ka saaran dadka Soomaaliyeed. Waxaan ka codsaneynaa hoggaamiye-yaasha Soomaaliyeed inay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalada, si loo helo xal wax ku ool ah, isla-markaana heshiis looga gaaro arrimaha harsan, iyadoo la muujinayo is xakameyn iyo tanaasul.
Maaddaama aysan jirin is-afgarad horseedaya doorasho loo wada dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo in la qabto, iyada oo aan dib loo dhigin, xiriirka bulshada caalamka iyo hoggaanka Somaliya ee is bedelaya ayaa Boqortooyada Midowday (UK) waxay la shaqayn doontaa saaxiibadeeda caalamiga ah qaab mideysan, oo dib loogu qiimeynayo xiriirkeena iyo nooca caawinaadda aan siino Somaliya.